China N'ogbe 3 naịlọn akpaka isi suppliers na Manufacturers - GRX mmanya (HONG KONG) CO., LTD.
.Lọ > Mkpọchi uwe isi > Zinc alloy akpaka isi > 3 Naịlọn akpaka isi
3 Naịlọn na-akpaghị aka isi ngwaahịa iwebata: Nke a 3 naịlọn akpaka isi na-mere nke European na American zinc alloy. The ụlọ ọrụ mechaa ISO9001: 2008 quality management usoro asambodo.
3Nylon akpaka isi
1.3 Naịlọn na-akpaghị aka isi mmepụta
Nke a naịlọn na-akpaghị aka 3 bụ nke zincalloy European na American. Companylọ ọrụ ahụ agafeela ISO9001: asambodo usoro njikwa njikwa 2008. Ọ nwere ọtụtụ ikike nchọpụta Kemịkalụ. Ngwaahịa niile agafeela SGS ma gafee nyocha ahụ. Tinye n'ahịa, webata usoro njikwa njikwa ngwaahịa zuru oke, meziwanye ngwaike na akụrụngwa dị iche iche, ma gbalịsie ike iji ọmarịcha ahịa.
2. 3 Nylon automatic headparaparaers (nkọwa)
N'ime oghere size: Ọnụ elu: 2.1MM
Ogologo Mmouth: 4.3MM
Uwe akwa: 0.85MM
Isi ihe: 1.8 MM
3. Ngwaahịa na ngwa nke3Nylon akpaka isi
A na-ejikarị isi zinc alloy na-arụ ọrụ n'ihu, akpa, akwa ụlọ, ihe egwuregwu, na akpa dị elu.
4. Product nkọwa nke 3 naịlọn automatichead
5. Iru eru ngwaahịa3Nylon akpaka isi
Companylọ ọrụ anyị agafeela asambodo njikwa njikwa nke ISO9001: 2008quality asambodo, nwere ọtụtụ ikike nchọpụta ikike, na-ewebata usoro njikwa njikwa ngwaahịa zuru oke, na-emeziwanye ngwa ahịa dị iche iche dị iche iche na sọftụwia, ma na-agba mbọ ijide ahịa ahụ na mma.
6. Nkwakọ ngwaahịa na nnyefe nke3Nylon akpaka isi
Tags na-ekpo ọkụ: 3 Nylon na-akpaghị aka, China, N'ogbe, Nnukwu, Ndị na-eweta ya, ndị na-emepụta ya